» पृथकतावादी समूह र सरकार बिचको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वय
पृथकतावादी समूह र सरकार बिचको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वय
६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:१८
हालै सरकार र पृथकतावादी समूह का नाइके सिके राउत बीच ११ बुँदे राजनैतिक समझदारी गर्‍यो । दुइतिहाइ सरकारले गरेको यो राजनीतिक सहमतिले यतिबेला राजनीतिक माहोल नै तात्तिएको छ। यो राजनैतिक समझदारी को झिल्कोले कतै नेकपा भित्र आगो सल्किने त होइन ?? भन्ने नेकपा का नेता तथा कार्यकर्ता हरु माथि ससंकित पैदा गरेको छ। त्यति मात्रै होइन । आम सर्वसाधारण हरु पनि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता विखणिडत हुने पो हो कि भनेर चिन्तित छन।
खासगरी यो समझदारी मा शंकास्पद देखिनु बुँदा नम्बर २ मा जनअभिमत उल्लेख भएर पनि हो। जन अभिमत भन्नाले जनताको मनोभावना लाई समेटेर राज्यले संविधान अनुरुप दिईने अधिकार भनेर बुझिन्छ । जनमतसंग्रह भनेर होइन। जनमतसंग्रह भनेको प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा , देशमा आपतकालीन र भयावह स्थिति आएमा गरिने मतदान प्रक्रिया हो भन्ने बुझिन्छ ।
तर नयाँ संविधानमा जनमतसंग्रह लाई कुनै पनि धारामा व्याख्या उपव्याख्या गरिएको देखिदैन । जनअभिमत भन्ने शव्द लाई केहि प्रतिक्रिया वादी शक्ति हरु ले । बढाइचढाइ गरेर प्रोपोगन्डा गर्दा , आमजनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको हो। ११ बुँदे सहमति पत्रको बारेमा । नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा । गृहमन्त्री स्वयं ले सदनमा जवाफ दिइसकेको र प्रधानमन्त्री आफैं ले पनि स्वराज स्वतन्त्र मधेस राज्यको लागी लडेका पृथकतावादी समूह का नाइके सिके राउत लाई राजनीतिक मुलधार मा ल्याउन द्विपक्षीय ११ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो भनेर प्रष्ट्याइ सकेका छन।
सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता लाई जोगाउन । राजनीतिक स्पेस खोजेका एक बैज्ञानिक र बौद्धिक क्षमता भएको डाक्टर सिके राउत , उर्फ ( चन्द्रकान्त राउत ) लाई । राष्ट्रिय राजनीति को मुलधार मा ल्याएर । समृद्ध नेपालको परिकल्पना बोकेको सरकारले देश विकासको लागी पनि राजनैतिक हैसियत दिन खोजेको हुनसक्छन् ।
अमेरिकामा Phd. गरेर हाइफाइ र विलासी जीवन बिताउदै आएका सिके राउत। एकाएक मधेस झरेर पृथक तरिकाले । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता लाई चुनौती दिदै । स्वतन्त्र मधेस को मुद्दा लिएर। तराई का मसिहा भनाउदा हरु । उपेन्द्र यादव , मातृकाप्रसाद यादव , महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई उछिन्दै । तराईमा उथलपुथल मच्चाउनु चानचुने कुरा होइन ।
विभिन्न चरण को मधेस आन्दोलन लाई नेतृत्व गर्ने ती मसिहा भनाउदा हरु ले । आ आफ्नो राजनीतिक पहुँच मात्रै बनाए । तराई मधेसमा वर्षौंदेखि चलिआएको को लैंगिक विभेद , गरीबी , बेरोजगार , छुवाछूत , अशिक्षा दहेज प्रथा , महाजन प्रथा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै उपलब्धिमूलक कार्यक्रम हरु गर्न नसक्नाले पनि। हिजो तिनै मसिहा भनाउदा हरु लाई साथ दिने त्यहीँ का । नेताकार्यकर्ता र स्थानीय हरु नै सिके राउत का सहयोगी र समर्थक भएर सिके राउत लाई अगाडि उभ्याए ।
११ बुँदे सहमति गरे लगत्तै जनकपुर पुग्दा । सिके राउतका समर्थक हरु ले पून : स्वतन्त्र मधेस को नारा लाग्नु , madhesh is not in Nepal , प्लेकार्ड , स्वतन्त्र मधेस लेखिएको दिप प्रज्वलन लगायत का गतिविधि हुनु । स्वयं सिके राउत का आधिकारिक फेसबुक आइडि बाट यस्ता गतिविधिको प्रचारप्रसार हुँदा । आम नेपाली हरु ससंकित हुनु स्वभाविकै हो।
१२ वर्षे जनयुद्धका कमान्डर कमरेड प्रचण्ड र १४ वर्षे जेल जीवन बिताएका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि लाई आखामा धुलो हाल्ने काम गरे सिके राउत को राजनीतिक चरीत्र समाप्त भएर जानेछ हेक्का होस् ।11:22 AMसर नमस्कारChat Conversation EndTypeamessage…